प्रकाश सपुत स्त’ब्ध: म एक स्वाभिमानी नेपाली, यो जुनीमा मान्छे मानिन्छु कि मानिन्न ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/प्रकाश सपुत स्त’ब्ध: म एक स्वाभिमानी नेपाली, यो जुनीमा मान्छे मानिन्छु कि मानिन्न ?
प्रकाश सपुत स्त’ब्ध: म एक स्वाभिमानी नेपाली, यो जुनीमा मान्छे मानिन्छु कि मानिन्न ?
काठमाडौं, १३ जेठ । रुकुम घटनाले अहिले अहिले लोकतन्त्रकै उपहास गरेको छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरुलाई यो घटनाले लज्जीत बनाएको छ । अन्तरजातिय विवाह गर्ने साहस गरेकी कारण एक होनहार युवकले मात्र ज्यान गुमाएका छैनन्, उनलाई साथ दिएका साथीहरुको पनि ज्यान लिइएको छ ।
घटनामा अझै ३ जना वे’पत्ता छन् । यो घटनाले दलित आन्दोलनमा लागेकाहरुलाई स्त’ब्ध बनाएको छ । विभेद वि’रुद्ध आवाज उठाउँदै आएकाहरुले सरकारसंग जवाफ मागेका छन् । कानुनमा जातियताका आधारमा विभेद गर्नेलाई द’ण्डनिय मानिएको छ । तर त्यसैका आधारमा होनहार युवाहरुको ज्यान नै लिइएको छ ।
आफुले माया गरेको प्रेमीका कथित उपल्लो जातका भएका कारण यि युवाहरुको ज्यान लिइएको हो । यो घटनाको सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना गरिएको छ । अझ उदेक लाग्दो कुरा त के छ भने यो घटनामा जनप्रतिनिधि ने संलग्न भएको कुराले थप स्त’ब्ध पारेको छ ।
घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा वडाध्यक्ष सहित १२ जना पक्राउ परेका छन् । आफ्नी प्रेमिकासँग बिहे गर्न रुकुम पुगेका उनको ढु गाले हि’र्काएरै ह’त्या गरियो । साथीहरुलाई वे’पत्ता पारियो । यहि घटनालाई लिएर निकै दुखी भएका गायक प्रकाश सपुतले पनि सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारलाई प्रश्न गर्दै लेखेका छन्, यो जुनीमा म मान्छे मानिन्छु कि मानिन्न सरकार । उनी सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्–‘म एक स्वाभिमानी नेपाली, यो जुनीमा मान्छे मानिन्छु कि मानिन्न ।’
उनले, नवराजको मृ’त्युसँगै सबैको आत्मसम्मानको पनि मृ’त्यु भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले दलित भएकै कारण, प्रेम गरेकै कारण म’र्नुपर्ने नियती देशकै लागि लज्जाको बिषय भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
थप १५० जना नेपाली आज कुवेतबाट आउँदै,